နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: December 2011
Thanks You Mum. ကျေးဇူးပါမေမ
မြူနှင်းတွေဟာ သြကာသ တစ်ခွင်ကို ၀ိုင်းပတ်နေတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀၀၀ ကျော် အဲဒီညမှာ Bethlehem ခေါ်တဲ့ အရပ်မှာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များအတွက် လာခြင်းကောင်းတဲ့ အရှင် ဖြစ်လာမယ့် သူငယ်တစ်ပါး ဖွားမြင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီ ခရစ်တော် ဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ ရက်ကို ခရစ္စမတ်နေ့ ရယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များက နေ့ထူးနေ့မြတ်တစ်ခု အဖြစ် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာဆို Carol Singing ကယ်ရို စင်းကင်း တေးသံတွေ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ အခါသမယလဲ ဖြစ်တယ်။
ဆိုင်ရာ ဘုရား ရှိခိုးကျောင်း ချာ့ခ်ျ တွေမှာ ဘုရားသွား ကျောင်းတက်သူတွေနဲ့ စည်ကားနေလို့ပေါ့။
Rome နိုင်ငံက စိန့်ပီတာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ Christian များ အလေးအမြတ်ထားတဲ့ ဂိတ်တံခါး (Holy Door or 'Porta Sancta') ဆိုတာ ရှိတယ်။ တစ်ချို့က အဲဒီ ဂိတ်တံခါးဟာ ကောင်းကင်ဘုံ ကိုဖြတ်သန်းဖို့ အသုံးပြုရတဲ့ တံခါးလို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ အဲဒီ ဂိတ်တံခါး ကို ၂၅ နှစ်မှ တစ်ကြိမ်သာ ဖွင့်တယ်။ အဲဒီ ဂိတ်တံခါးကို ဖွင့်တဲ့နှစ်ကို holy year လို့ ခေါ်ဆိုကြတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်တိုင် ဂိတ်တံခါးကို ငွေတူနဲ့ အသာ ရိုက်နှက်ပြီးတော့ ဖွင့်တယ်။ အဲဒီ holy year နှစ်ကုန်ဆုံးသွားရင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်တိုင် ပြန်ပိတ်ပေးတယ်။
အဲဒီဂိတ်တံခါး ပွင့်တဲ့ တစ်ခုသော Holy Year ရဲ့ တစ်ရက်သော ခရစ္စမတ်ညမှာပေါ့။
ချမ်းအေးတဲ့ နယ်စပ်တောင်ပေါ်မြို့လေးဟာ ခရစ္စမတ် ရာသီ ထုံးစံ ဖြစ်တဲ့ အတိုင်း ကယ်ရိုစင်းကင်း တေးသံသာ တွေ လွှမ်းခြုံနေခဲ့တယ်။
ဆောင်းရဲ့ သင်္ကေတ ဖြစ်တဲ့ ဆီးနှင်းများဟာလဲ အဆက်မပြတ် ကျဆင်းနေခဲ့တယ်။
ဘုရားကျောင်းမှာတော့ လူတွေ စည်ကားနေလို့။
မြို့ကလေးရဲ့ တစ်နေရာမှာတော့ မိသားစု တစ်ခု ရှိနေခဲ့တယ်။
ညဦးပိုင်းကမှ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီး ပြန်လာကြတာ။
ခုနကတော့ ကယ်ရိုဆင်းကင်း လာဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကတော့ ခရစ်တော်ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ချီးမွမ်းပြီး ပြန်သွားကြလေရဲ့။
မြို့ကလေးရဲ့ ထုံးစံက ဘာသာမရွေး မိမိ အိမ်ရှေ့မှာ ဘယ်ဘာသာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ ထုံးစံအတိုင်း ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ လာဆင်နွဲရင်လဲ ခွင့်ပြုတတ်ကြတယ်။
ခုနက လာဆိုသွားတဲ့ အဖွဲ့ကိုလဲ မိသားစု အကြီးအကဲက အလှူငွေ ထည့်ဝင်လိုက်သေးတယ်။
အဲဒီနောက် ချမ်းအေးတဲ့ ဒီဇင်ဘာ အအေးဒဏ်ကို ခုခံဖို့ မီးဖိုငယ်လေး တစ်ခုအနားမှာ ၀ိုင်းဖွဲ့ရင်း ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကား အကြောင်းကို စားမြုံ့ပြန်နေကြတယ်။ ခေါပုတ်တွေ မီးကင်စားရင်းပေါ့။
အဝေးမှာတော့ သီချင်းသံတွေက လေအသဲ့မှာ ပျံ့လွှင့်နေလေရဲ့။
ဒီအချိန်မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးရဲ့ ဇနီးကတော့ ခုံပေါ်မှာ သက်တောင့်သက်သာ ထိုင်နေလေရဲ့။ ရွှေကြုတ်တော်ကို နှုတ်ငုံထားတော့ အများတကာလို အောက်မှာ ထိုင်လို့က မဖြစ်ဘူးကိုး...။ မီးဖိုဝိုင်းထဲ မပါခဲ့ပေမယ့် သူတို့တစ်တွေ ပြောတဲ့ စကားဝိုင်းကို ရယ်လိုက် မောလိုက်ပေါ့။
ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကမ္မဇလေက လှုပ်ရှားလာတယ်။ မွေးရက်က လိုသေးတော့ ပုံမှန်ပဲလို့ သူမ ထင်နေခဲ့တယ်။
နောက်တော့ အကြိမ်ရေတွေ စိပ်စိပ်လာတဲ့ ခဏမှာ...။
အိမ်ထောင်ဦးစီးက အောက်လင်းမီးကို ကပျာကရာထွန်း။
ညီမ များက ရေနွေးတည်။
တစ်ခြားရပ်ကွက် လက်မှတ်ရ ၀မ်းဆွဲဆရာမကို ပြေးခေါ်သူခေါ်နဲ့ တစ်နာရီအတွင်းလောက်မှာ အားလုံး အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။
လေအဝှေ့မှာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက ခရစ်တော် မွေးဖွားတာကို ကြိုဆိုတဲ့ ခေါင်းလောင်းသံ ကြားလိုက်ရတယ်။
အိမ်ထဲက မီးနေခန်းမှာ အဲ့ကနဲ ကလေး ငိုသံ သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်...။
ဒီလိုနဲ့ လောကကြီးထဲကို (အဲဒီတုန်းက) ဖြူစင်တဲ့ ကလေးလေး တစ်ယောက် ရောက်ခဲ့တယ်။
ဘာလိုလိုနဲ့ ရာသီစက်ဝန်းတွေတောင် တစ်ပတ်ပြန်လည်သွားတယ်။
(2008 တုန်းက တင်ထားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ ပြန်ဖတ်မိတိုင်း သဘောကျမိလို့ ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာလဲ ဒီလိုပဲ ထပ်တင်လိုက်ပါတယ်။)
ဒီနှစ် ၂၀၁၁ မှာ
ကျွန်တော့်ကို surprise ဖြစ်သွားစေတဲ့
သူကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့ မွေးနေ့ကိတ်နဲ့ မွေးနေ့ကဒ်လေးပါ။
The most perfect Birthday Preset I ever received.
သူကိုယ်တိုင် လုပ်လာတဲ့ မွေးနေ့ကိတ်
သူကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးတဲ့ မွေးနေ့ကဒ်
သိုင်းကျူး ဟန်နီ အတဲလေး...။ :P
@=@= Happy Birthday To Me =@=@
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:43 AM9ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
You might got Dust in your eyes
9Gag Fan တွေ ဆိုရင်တော့ ဒီဗွီဒီယိုကလစ်ကို နားလည်နိုင်မှာပါ။
Credit to uploader and 9gag.
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:33 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Love me, movie, Youtube
Good News for Myanmars Working in Oversea
အခုလို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်တာ အမြဲတမ်းဖြစ်ပါစေ။
ပြည်ပရောက် မြန်မာများရဲ့ လစာကနေ အခွန်ငွေ ကောက်ခံခြင်းကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ သတင်းနဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာများအပေါ် ဖိနှိပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာသံရုံးများက အကူအညီ ပေးဖို့ သမ္မတကြီးက ကြေငြာစာထုတ်လိုက်တဲ့ သတင်းတွေပါ။
သတင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပုံနဲ့ စာတွေကို အင်တာနက် အွန်လိုင်း ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာများကနေတစ်ဆင့် ရယူထားပါတယ်။
ဆဲဗင်းနယူးစ်ကလဲ သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း တင်ထားပါတယ်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများကို ၀င်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု
by 7Day News Journal on Thursday, December 22, 2011 at 7:24pm
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ - ၂၂
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၁ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်တွင် ပြည်ပရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများ ပေးဆောင်နေရသော ၀င်ငွေခွန်ကို ၁၀ ရာခိုင် နှုန်းမှ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချပေး ခဲ့သည်။ သို့သော် အဆိုပါဝင်ငွေ ခွန်လျှော့ပေါ့ပေးမှုမှာ ခြောက်လတည်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်မှစ၍ ပြည်ပအလုပ်သမားများအနေဖြင့် ၀င်ငွေခွန် လုံးဝပေးဆောင်စရာမလိုတော့ပေ။
အလားတူပါပဲ Eleven Media Group ကလဲ သူတို့ရဲ့ ဝက်ဆိုဒ်စာမျက်နှာမှာ အဆိုပါ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြထားပါသေးတယ်။
ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသား၏ ၀င်ငွေအပေါ် စည်းကြပ်ကောက်ခံသောအခွန်အား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်
ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ၀င်ငွေအပေါ် စည်းကြပ်ကောက်ခံသော အခွန်အား ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရ ပြည်ပနေနိုင်ငံသားများက နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရရှိသည့်လစာခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ ၀င်ငွေစုစုပေါင်းအပေါ်ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေအမျိုးအစားဖြင့် ပေးဆောင်စေသည့် ၀င်ငွေခွန်ကို ၀င်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ-၅၊ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
''အခုဟာက နိုင်ငံခြားကနေ နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ ပြည်တွင်းကိုလွှဲတဲ့ လစာငွေတွေအပေါ် ကောက်ခံတဲ့ဝင်ငွေခွန်ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းကျရင် ဟွန်တီပါပျောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရတယ်'' ဟု လည်း စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
''ဒီလို အခွန်လျော့ချလိုက်တော့ နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေလျော့သွားပေမယ့် နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ကောင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားနဲ့ တရားဝင်ငွေလွှဲတဲ့သူ များလာမယ်။ နိုင်ငံခြားငွေတွေလည်း တိုက်ရိုက် ၀င်လာနိုင်တယ်။ နိုင်ငံခြားကနေ ဘဏ်နဲ့ချိတ်ပြီး တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲတာတွေ ရှိလာမယ်။ဒီအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်။ အခုဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွေမှာလည်း မြန်မနိုင်ငံက MFTB,MICB အစရှိတဲ့ ဘဏ်ခွဲတွေ ဖွင့်မယ်ဆိုတာလည်း ကြားသိရတယ်ဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေသွား နိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်းဆိုရင် နိုင်ငံခြား ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေလည်း ဖွင့်ပေးတော့မှာဆိုတော့ ငွေလွှဲတဲ့ကိစ္စတွေ အဆင်ပြေမှာပါ'' ဟုလည်း စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းကို ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်အကျိုးသက်ရောက် မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် မည်သည့်နေ့မှ မည်သည့်နေ့အထိ ခွင့်ပြုသည်ဆိုသည့် ကန့်သတ်ချက် မပါဝင်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါဝင် သော အကြောင်းအရာအရ ပြည်ပ၌ ၁၈၃ ရက်နှင့်အထက် နေထိုင်ခဲ့ပြီး အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသူများ၏ လစာဝင်ငွေ အပေါ်ကောက်ခံသောဝင်ငွေခွန်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အပေါ်က ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ကြေငြာချက်နဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ နောက်ထပ် ကြားရတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများကို မတရားဖိနှိပ်တာတွေ ခံရတယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးက အကာအကွယ်ပေးမယ့်အကြောင်း ကြေငြာတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:43 PM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Myanmar, news, Tax
ကလေးကို နည်းမှန်လမ်းမှန် ဂရုစိုက်နည်း။
Credit to : http://i.imgur.com/PTdL7.jpg
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:44 PM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: baby, Funny, Joke, picture
AaB ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အလှူမှတ်တမ်း (Sharing Post)
(စကားချပ်။ ။ မချစ်ကြည်အေးထံမှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
ကျွန်မတို့ အားလုံးမှာ လူသားဆန်တဲ့ စိတ်နှလုံးကိုယ်စီ ရှိကြတယ်။ ရှိအောင်လည်း လေ့ကျက်သင့်တယ်။ ဘာမဆို အလေ့အကျင့်ထုံလာရင် အစွဲအလန်းဖြစ်သွားတတ်တာ ဓမ္မတာပဲ မဟုတ်လား။ ခုဆိုရင် ကျွန်မတို့ ဘလော့ဂ်ဂါ မောင်နှမတွေ၊ ရေးဖော်ရေးဖက်တွေ စုစည်းထားတဲ့ AaB Myanmar (AaB-All about Bloggers) ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေးမှာ ဒါနအထုံ စတင် မျိုးစေ့ချနေပြီလို့ ဆိုရပါမယ်။
မကြာသေးခင်ကမှ ပခုက္ကူနယ်တစ်ဝိုက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သဘာဝရေဘေးဒဏ်ကို ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ ထိခိုက် နာကျင်စွာ ခံစားခဲ့ကြရတာကို မှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတုန်းက AaBက ပထမအကြိမ်အဖြစ် ကျပ်ငွေ ၃၃သိန်းခွဲတိတိ လှူဒါန်းနိူင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ပခုက္ကူ အလှူမှတ်တမ်း မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှူ့နိူင်ကြပါတယ်။
ခုတစ်ခါ သွေးပူနေသေးတဲ့ ကျွန်မတို့အတွက် နောက်ထပ်အလှူတစ်ခု လှူဖြစ်ဖို့ ဖန်လာပြန်ပါတယ်။ ရေးဖော် ဘလော့ဂ်ဂါ ကိုဘွိုင်းဇ်ရဲ့ စတင်လှူံ့ဆော်ပေးမှူက စတင်ခဲ့တာပါ။
မောင်သန်းဇော်ဦးဆိုတဲ့ ရနှစ်အရွယ် စစ်တွေက ကလေးတစ်ယောက် အသည်းမှာ ရေအိတ်တည်တဲ့ ဝေဒနာ ခံစား နေရပြီး အကြီးစားခွဲစိတ်မှူမှ မပြုလုပ်ရင် အသက်ရှင်စရာလမ်း မမြင်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ မူရင်းသတင်းကိုတော့ The Voice Journalကတစ်ဆင့် သိရှိရတာပါ။
ကလေးကို ပုံနဲ့တကွ တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာ ကျွန်မတို့အားလုံးပဲ ကလေးငယ်ရဲ့ ခွဲစိတ်စရိတ်ကို တစ်နိူင်တစ်ပိုင် မျှခံပေးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ လူသားငယ်ကလေးရဲ့ အသက်တစ်ချောင်းအတွက် ကျွန်မတို့တစ်တွေ တတ်နိူင် သလောက် ဖေးမပေးလိုက်ချင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ပေါ့ရှင်။ ခွဲစိတ်ကုသမှူ အောင်မြင်ပါစေလို့လည်း မေတ္တာ ပို့ပေးမိပါရဲ့။
၁ရက်နေ့ကနေ ၇ရက်နေ့ ဒီဇင်ဘာအထိ ကလေးခွဲစိတ်စရိတ်အတွက် အလှူငွေ ကောက်ခံလိုက်ကြတာ စုစုပေါင်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၇၉၀ (ကျပ်ငွေ ၁,၀၉၁,၉၀၀) ရရှိပြီး ကလေးဆီဆက်သွယ်ပေးပို့လို့ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ခွဲစိတ်ကုသမှူကုန်ကျငွေ အကြမ်း ၁၀သိန်း ကနေ သိန်း ၃၀ခန့် ကုန်ကျနိူင်မယ် ဆိုတော့ကာ ကျွန်မတို့ AaBကနေ ကုသစရိတ်ရဲ့ ၃ပုံ ၁ပုံလှူနိူင်ခဲ့တယ် ဆိုရပါမယ်။ အားလုံးကိုယ်စား အင်မတန် ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်မိရပါတယ်။
နောက်ဆုံးသတင်းအရ မနက်ဖြန် ဒီဇင်ဘာ ၉ရက်နေ့မှာ ကလေးငယ်ကို ခွဲစိတ်ကုသမှူ ပြုလုပ်ကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသမှူ အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ကလေးအတွက်ပါဝင်လှူဒါန်းကြတဲ့ AaBမှ ရပ်ဝေးရပ်နီး ဘလော့ဂ်ဂါမောင်နှမများ နဲ့ နှလုံးသားချင်းထပ်တူကျသော အလှူရှင်များ၊ စာဖတ်သူများရဲ့ ထက်သန်လှတဲ့ စေတနာ သဒ္ဒါတရားအတွက် အလှူငွေစာရင်းလေးကို ဒီနေရာမှာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါရစေရှင်။
1-Dec-11 ITR 50 I-BANK မေသူခိုင်
1-Dec-11 ITR 30 I-BANK IBank ကိုသီဟသစ် arrmanthit.blogspot.com/
1-Dec-11 ITR 50 I-BANK ချစ်ကြည်အေး
1-Dec-11 ATR 50 သိန်းထိုက် (ဖိုးသင်္ကြန်) www.phothagyan.blogspot.com
1-Dec-11 ATR 50 ပူးတေ april-poo.blogspot.com/
1-Dec-11 ITR 50 I-BANK တီအိုအိုင် (Turns On Idea) http://turnonideas.blogspot.com
1-Dec-11 ITR 50 I-BANK သက်ဝေ http://www.thet-wai-blog.blogspot.com
1-Dec-11 ITR 30 I-BANK မယ်ကိုး http://www.maecoe.net
1-Dec-11 ITR 50 I-BANK ကိုဘွိုင်းဇ် http://heartstations.blogspot.com/
1-Dec-11 ITR 60 I-BANK အန်တီတင့် http://www.auntytint21183.net
2-Dec-11 ATR 30 မိုးခါး
2-Dec-11 ATR 30 စိုးမင်းထိုက်
2-Dec-11 ATR 50 မနော်ဖော http://rose-sharon.blogspot.com
2-Dec-11 ATR 50 မေလေး
2-Dec-11 ITR 50 I-BANK မေဇင်အေး http://monethu.blogspot.com
2-Dec-11 ITR 50 I-BANK ကိုလူသစ် http://luthit.blogspot.com
2-Dec-11 ITR 50 I-BANK -ခိုင်စုလတ် http://cherrydreamblog.blogspot.com/
2-Dec-11 ATR 30 ဦးဇော်မြင့်
2-Dec-11 ITR 50 I-BANK ကိုဌေးအောင် http://luula18.blogspot.com
2-Dec-11 ITR 50 I-BANK ဖိုးစိန် http://phoesein.blogspot.com
2-Dec-11 ITR 30 I-BANK ဘိုဘို http://www.mogokthar.com
2-Dec-11 ITR 50 I-BANK အမေ့သား http://amaythar1976.blogspot.com/
3-Dec-11 ITR 50 I-BANK တီဇက်အေ http://www.degolar.info
3-Dec-11 ATR 50 ကိုဇူလိုင် http://july-dream.blogspot.com
3-Dec-11 ITR 30 I-BANK ကိုခင်မောင်ဦး မသန္တာလွင် http://thandarlwin.blogspot.com
3-Dec-11 ITR 10 I-BANK ကိုသက်နိုင်
3-Dec-11 ITR 10 I-BANK ကိုမျိုးထွန်း မ၀တ်ရည်ထွန်း
3-Dec-11 ITR 10 I-BANK ကိုဇင်မင်းငြိမ်း မခင်မာဝင်း
3-Dec-11 ITR 10 I-BANK မအေးမင်းလတ်
3-Dec-11 ITR 10 I-BANK မ၀င်းဝင်းမြင့်
3-Dec-11 ITR 10 I-BANK မဆွေမွန်ဦး
3-Dec-11 ITR 10 I-BANK ကိုဟိန်းလတ်ဝင်း မနီလာမိုး
3-Dec-11 ITR 20 I-BANK ဦးတင်မောင်ညွန့် မိသားစု
3-Dec-11 ITR 10 I-BANK ကိုကျော်ဇေယျ မနိုနိုဝင်း
4-Dec-11 ITR 50 I-BANK ကိုဇော်သက်အောင် http://www.phoonuthit.com
5-Dec-11 ATR 50 နိူဘယ်မိုး http://www.noblemoe.blogspot.com
5-Dec-11 ITR 20 I-BANK ငြိမ်းချမ်းကျော်
5-Dec-11 ITR 100 I-BANK Oversea Burmese Youth Group (OBYG)
5-Dec-11 ITR 100 I-BANK Anonymous
5-Dec-11 ITR 15 I-BANK မအိခိုင်
5-Dec-11 ITR 30 I-BANK ကိုဇီးရိုး
6-Dec-11 ITR 30 I-BANK ကိုအောင်ကျော်လွင်
6-Dec-11 ITR 50 I-BANK Meredith Johnson
7-Dec-11 ITR 30 I-BANK မခင်ချိုလွင်
7-Dec-11 ITR 20 I-BANK မအေးမြတ်မြတ်မွန်
7-Dec-11 ITR 50 I-BANK ကိုဝင်းကျော်ထွန်း
7-Dec-11 25 မအိမ်သူ http://warkhaungmoe.blogspot.com/
မချစ်ကြည်အေးထံမှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:49 PM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Donation for Kid who need urgent operation in Myanmar
ကလေးလေးရဲ့ လက်ရှိ Update အခြေအနေများကို အောက် အလှူရှင်စာရင်းအောက်မှာ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ တင်ပြထားပါတယ်။ လောလောဆယ် အလှူခံတာ လျာထားချက် ပြည့်မှီသွားလို့ ခဏရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။
ကလေးလေးအတွက် ဘလော့ဖတ်မိပြီး စေတနာရှင်များမှ အောက်ပါအတိုင်း လှူဒါန်းလာပါတယ်။
၁။ အမည်မဖော်လိုသူ Anonymous S$ 100. (Transferred to Yangon on 07 Dec 2011)
၂။ မအိခိုင် S$ 15 (Transferred to Yangon on 07 Dec 2011)
၃။ ကိုဇီးရိုး S$ 30 (Transferred to Yangon on 07 Dec 2011)
၄။ ကိုအောင်ကျော်လွင် S$ 30 (Transferred to Yangon on 07 Dec 2011)
၅။ Meredith Johnson S$ 50 (Transferred to Yangon on 07 Dec 2011)
၆။ မခင်ချိုလွင် S$ 30 (Transferred to Yangon on 07 Dec 2011)
၇။ မအေးမြတ်မြတ်မွန် S$ 20 (Transferred to Yangon on 07 Dec 2011)
၈။ ကိုဝင်းကျော်ထွန်း S$ 50 (Transferred to Yangon on 07 Dec 2011)
၉။ Ma May Su Sandy S$ 50 (Will transfer to Yangon on next batch donation)
၁၀။ Ma သွယ်ဇင်ဦး S$ 30 (Will transfer to Yangon on next batch donation)
ကောက်ခံရရှိလာသည့် အထက်ပါ အလှူငွေများကို ရန်ကုန်သို့ ပို့ပေးရန် လက်ခံပေးနေသော မြန်မာဘလော့ဂါအဖွဲ့အစည်း (All about Bloggers) ထံသို့ လွဲပြောင်းပေးပါမည်။
အလှူငွေဖြတ်ပိုင်းရရှိပါကလည်း ဤဘလော့ပေါ်၌ ပြန်လည်တင်ပေးပါမည်။
နောက်ဆက်တွဲ ၁(ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၀၁)။
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ရခဲပါတယ်။ အဲဒီလိုရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀လေးမှာ ကောင်းမွန်စွာ ရှင်သန်နေနိုင်ဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒီကလေးလေးဟာ သူ့အသက်နဲ့မမျှတဲ့ အသည်းရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရရှာပြီး အကြီးစားခွဲစိတ်ကုသမှုကို အချိန်မီရရှိနိုင်မှသာ အသက်ဆက်လက် ရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးပိုင်းမှာ အခက်အခဲကြီးမားစွာ ဖြစ်နေသည့်အတွက် မိမိတို့တတ်စွမ်းသလောက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးကြမယ်ဆိုရင် ရခဲလှတဲ့ ဒီအသက်လေးတစ်ချောင်းဟာ သူ့ဘ၀လေးကို ဆက်လက်ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၆၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
ကလေးနာမည်က မောင်သန်းဇော်ဦးပါ။ အသက်က ရနှစ်ပါ။ ဖခင်ကတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ သူခံစားနေရတဲ့ရောဂါက အသည်းမှာ ရေအိတ်တည်နေတာပါ။ လက်ရှိ စစ်တွေမှာရှိနေပြီး မိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူ တနင်္ဂနွေနေ့ကို ရန်ကုန်ကိုရောက်ပါမယ်။တနင်္လာနေ့မှာ ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးကို တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိရသမျှအခြေအနေများကို ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။
၂၇၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
မောင်သန်းဇော်ဦးရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိပါပြီ။ သူနှင့်အတူ မိခင်၊ အဒေါ်နှင့် ၇လသားညီလေးပါလာပါတယ်။ မနက်ဖြန် အလုံကလေးဆေးရုံကြီးကိုတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၈၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
မောင်သန်းဇော်ဦးအား ကလေးဆေးရုံကြီး အဆောင် ၁၊ အခန်း ၂၊ ကုတင် ၃ တွင်တင်ထားပြီး လိုအပ်သော ဆေးစစ်မှုများကိုပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
၅၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
မောင်သန်းဇော်ဦးအား အလုံကလေးဆေးရုံကြီးတွင် တင်ထားပြီး 64 CT Scan ရိုက်ပြီးသွားပါပြီ။ ၆ ရက်နေ့တွင် ဆေးစစ်ချက်အဖြေများရရှိပြီး ကလေး၏အခြေအနေမှာ အသည်းတစ်ခုသာထိခိုက်နေပြီး ကျန်သောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများမှာ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်လျက်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ဆရာဝန်များ၏ ထပ်မံညွှန်ကြားချက်အရ ယနေ့ ၇ရက်နေ့တွင် ဆေးစစ်ရန်နောက်ဆုံးလိုအပ်အချက်အနေဖြင့် ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ပါမည်။ ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်း အစစအရာရာအဆင်ပြေပါက နောက်အပါတ်တွင် ခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်မည်ဟု ဆရာဝန်များက အကြောင်းကြားထားပါသည်။
လက်ရှိကောက်ခံရရှိသောအလှူငွေများမှာ မြန်မာ၊ စင်ကာပူ၊ ဒူဘိုင်းနှင့် အမေရိကမှဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၃၅ သိန်းကျော်ရရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဝန်များ၏ ကြိုတင်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ ၁၀ ~ ၃၀ သိန်း ဖြစ်သဖြင့် ခွဲစိတ်မှုကုန်ကျစရိတ် လုံလောက်ပြီဟု လတ်တလောအနေဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး ခွဲစိတ်မှုပြီးနောက်ထပ်မံလိုအပ်ဦးမည်ဆိုပါက လှူဒါန်းရန်စိတ်ဝင်စားသော အလှူရှင်များအား အကြောင်းကြားပေးပါမည်။ မောင်သန်းဇော်ဦးဓါတ်ပုံနှင့်အကူအညီလိုအပ်ကြောင်းပို့စ်ကိုတင်ပြီးသည့်ရက်မှစ၍ တစ်ပါတ်ကျော်အတွင်း ယခုကဲ့သို့လုံလောက်သောအလှူငွေများရရှိသည့်အတွက် မောင်သန်းဇော်ဦးနှင့်မိသားစုကိုယ်စား အထူးပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါသည်။ လှူဒါန်းကြသောအလှူရှင်အပေါင်းအားလည်း ကျမ မဆုမွန်အောင်၊ မမိုးမိုးအေးဒွေး၊ မငြိမ်းနုဖြူ နှင့် ကာယကံရှင်မိသားစု တို့မှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ခွဲစိတ်ပြီးအခြေအနေကိုလည်း ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ တင်ပေးပါမည်။
လှူဒါန်းထားကြသောအလှူရှင်များအနေဖြင့်ယခင်ဆက်သွယ်ရန်ပေးထားသော ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ် နှင့် နေရပ်လိပ်စာများအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါသည်။ အလှုရှင်များ၊ လှူဒါန်းငွေအသေးစိတ် နှင့် ခွဲစိတ်မှုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို စာရင်းနှင့်တကွ ပြန်လည်တင်ပေးပါမည်။ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုကြသောသူများအနေဖြင့် မက့်ဆေ့ခ်ျပို့၍ မေးမြန်းနိုင်ကြပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲ (၁) ပြီးဆုံး၏။
အမေ့သား ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းဖတ်မိ၍ သိရှိမိသလောက် ပြန်ဝေငှရသော်
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့အနီး မင်းကယ်ကျေးရွာအနီးတွင် နေထိုင်သော အသက် ၇ နှစ်အရွယ် ကလေးလေးမှာ အသည်းရောဂါကြောင့် ဝမ်းဗိုက်အဆမတန် ဖောင်းကားနေသော ရောဂါ ခံစားနေရပါသည်။ ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ရမည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ယခုအခါ တောင်ဒဂုံရှိ ကလေး ဆေးရုံတွင် ရောက်ရှိနေပြီး ခွဲစိတ်ခ ၂၇ သိန်း လိုအပ်မည်ဟု သိရပါသည်။ ခွဲစိတ်မှု အချိန်မီ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက အသက်ရှင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေ ဘလော့ဂါများ စုပေါင်းက အလှူငွေများ ကောက်ခံလျက် စုဆောင်းရရှိငွေများကို သက်ဆိုင်ရာ ကလေးမိဘထံ လွဲပြောင်းရန် စီစဉ်နေပါသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၇ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ကောက်ခံပြီး ရန်ကုန်သို့ ဒီဇင်ဘာ ၈ရက်နေ့၌ လွဲပြောင်းပေးပါမည်။
သို့ပါ၍ ကလေးငယ်အတွက် ခွဲစိတ်ခအတွက် ပါဝင်ကူညီ လှူဒါန်းလိုသူများ mr.boyz@gmail.com ထံ အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ။
***အလှူငွေများကို လက်ခံပေးနေသော မြန်မာဘလော့ဂါအဖွဲ့အစည်း (All about Bloggers) ထံသို့ လွဲပြောင်းပေးပါမည်။***
***အလှူငွေဖြတ်ပိုင်းရရှိပါကလည်း ဤဘလော့ပေါ်၌ ပြန်လည်တင်ပေးပါမည်။***
သတင်းတင်ပြပေးသော The Voice ဂျာနယ်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မူရင်းသတင်းလင့်ခ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Credit : The Voice Journal
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:02 AM0ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
AaB ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အလှူမှတ်တမ်း (Sharing P...
Donation for Kid who need urgent operation in Myan...